RASMI: Barcelona oo xaqiijisay in Lionel Messi uusan kooxda inteeda kale ula safri doonin dalka Mareykanka – Gool FM
(Spain) 05 Agoosto 2019. Kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa dhaawacmay inta lagu gudajiray tababarkii Blaugrana ee subaxnimada Isniinta ah.
Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa xaqiijisay in kabtankeeda Lionel Messi uusan qeyb ka noqon doonin safarka ay kooxda reer Catalonia ugu kicitami doonto dalka Mareykanka.
Website-ka rasmiga ah ee kooxda Barcelona ayaa lagu sheegay in Messi uu maanta ka soo muuqday tababarka, balse uu dhaawac ka soo gaaray lugta midig, sidaa darteed uu sii joogi doonaa dalka Spain, si uu kaga kabto dhaawaca soo gaaray isla markaana uu u helo daaweyn.
Barcelona ayaa la qorsheenayaa inay u safarto dalka Mareykanka si ay halkaas ugu soo sameyso diyaargaroowdeeda ugu dambeeya ee xili ciyaareedka cusub, waxayna halkaas kula ciyaari doonaan kooxda reer Talyaani ee Napoli.
Wararka ayaa waxay sidoo kale intaas ku sii darayaan in Lionel Messi uu sameeyay tababarkiisii ugu horeeyay ee kooxda Barcelona subaxnimada maanta oo Isniin ah, kaddib fasaxii xagaaga.
RASMI: Manchester United oo shaacisay inay dhameystirtay heshiiska Harry Maguire